Umbala weendonga ngaphakathi kunye nomphumo wayo kumntu
Ezinye iingcali zithi umbala weendonga uchaphazela iingcamango zethu. Ngale nto kunzima ukungavumelani. Ukuba awuhlali uhlala ekhaya, cinga ngendlela yokubuyisela iindonga. Ngoko, umbala weendonga ngaphakathi kunye nomphumo wayo kumntu - oku uya kufunda apha ngezantsi.
Ukuba ungena kwiofisi okanye kwelinye igumbi "elisemthethweni", iindonga zalo zidwetswe ngombala obomvu, ungacinga ukuba uye wenziwa ngephutha ngendlela ethile ye nightclub. Ukuba iindonga zendlu zifakwe ngokumhlophe ngokupheleleyo, oku kungabangela ukudakumba okukhulu kubantu abahlala khona. Iingcali zidibanisa umbala omhlophe weendonga kunye nesibhedlele kwaye zidibanisa nesi sifo.
Kukho imibala eya kunceda ukuphumla nokuphumla, kwaye kukho abo banceda ukugxila ngakumbi. Konke oku kufuneka kuqwalaselwe xa ukhetha imibala apho ufuna ukuyihlobisa ingaphakathi kwigumbi okanye yonke indlu.
Njengoko iingcali zichaza, amagumbi aneefestile ngasenyakatho afuna imibala efudumeleyo kunye neqaqambileyo, ngelixa emagumbini enombono ongasemzantsi kungcono ukusebenzisa imibala yemvelo kunye nentsholongwane. Kwiindonga ezisemagumbini "asentshonalanga" zifanele iifudumele ezifudumele zegrey, ukhilimu kunye nemibala ye-pastel. Kwimibala engasempuma - ebandayo.
Indlu yindawo apho singakwazi ukuphumla size siphinde sithole amandla emva komsebenzi, siphumelele uxinzelelo. Ngoko ke, kucetyiswa ukuba ukhethe imibala enceda ukuphumla nokudala umoya ofudumele, ocolileyo kwaye okhululekile. Nazi ezinye iingcebiso zengcali indlela yokukhetha umbala weendonga ngaphakathi:
Ubomvu ngumbala wokupholisa. Isebenza ngokugqithiseleyo kubantu abaninzi. Iingcali zikholelwa ukuba kufuneka ukhethwe kwigumbi lokulala okanye kwigumbi langasese. Kunconywa amabala omhlaza okwesibhakabhaka kumagumbi amancinci. Kodwa kufuneka ukhethe umthunzi ngokucophelela: ukuba igumbi litsho mnyama, kungcono ukhethe umbala ohlukileyo, ngaphandle koko igumbi liya kubanda ".
Inketho egqibeleleyo - inhlanganisela yentsimbi eluhlaza kunye nomhlophe. Ubuluhlaza luyimvelaphi ebalaseleyo eminye imibala, kodwa ungayidluli. Ngokwenani elikhulu, lo mbala ungakha umqondo wobumnyama.
Ukuba ufuna ukuvelisa ngokucacileyo igumbi, khetha umbala ophuzi. Iitoni ezimhlophe zelinen zihambisana kakuhle. Umphumo kumntu webala ophuzi uphumelele kakhulu. Kukholelwa ukuba lo mmbala uvuselela inkqubo ye-nervous. Kunconywe kwigumbi lokulala, kuba lidala umoya ophumayo kwaye lukhuthaza ukuphumula. Kuyafaneleka ekicini ngokudibanisa neetoni eziluhlaza kunye ezimhlophe.
Nangona oku kungumbala "onobungozi", akufanele ukunyanzeliswa. Olubomvu - umbala wobomi kuyo yonke imbonakalo yayo, umbala wamandla kunye nomdla. Ukuba le mthunzi isetyenziswe ngokuchanekileyo, ngokucophelela nangamanani amancinci, unokufumana iziphumo ezintle.
Ubomvu yisisombululo esihle kwikorri, iholo okanye igumbi lokuhlala, kodwa kungekho kwigumbi lokulala, igumbi labantwana okanye ikhitshi. Abahlongisi bahlala behlanganisela iifom ebomvu ezidityanisiweyo ukuze kuhlolwe ifenitshala yeenkuni, ukudala ngaphakathi kwindlela ebizwa ngokuba "yasemaphandleni".
I-Orange ithathwa njengombala wobumba. Iingcali zichaza njengombala ovuyo kakhulu. Lo mmbala ngaphakathi udala umoya ofudumele.
Eyona nto ibandakanyekayo kumagumbi abanda abandayo kunye namagumbi adibeneyo - anokuhlaziywa ngoncedo lwama-shades e-orange. Lo mmbala ufanelekile kwigumbi lokudlela kunye neendawo zokuhlala.
Oluhlaza ngumbala wokuzola kunye nokulinganisela. Kubangela ubudlelwane obunzulu kunye nemvelo kunye nokwenza uvakalelo, kodwa kunzima ukudibanisa neminye imibala. Ukuba ufuna ukudala umoya ovuyayo, khetha umthunzi oluhlaza oluhlaza, ukuba ufuna uxolo lwengqondo-ngaphezulu kuthulisiwe. Kodwa ukuba ufuna ukuvuselela amandla - bhekisa kwii-shades ezi-turquoise ezifanelekileyo ngakumbi kwigumbi labantwana.
Ukhetho olulungileyo lwebhedi
KwiiTropics: "i-botany" - umgangatho wendawo-2016
Ukukhetha ifenitshala yokulala
I-chic yePhondo, okanye indlela yokuhlobisa ingaphakathi kwisitayela seProvence
Imveliso efanelekileyo kunye neyokutya
UKonstantin Meladze uthetha ngokugweba okungekho nkohliso kwi-Eurovision 2016
Kutheni sifunda ngokuvakalayo?
I-Cheesecake nge jam
Inkomo kwi-sauce yewayini